Sigara içmek / धुम्रपान – Diyaloglar | OpenTran
Sigara içmek / धुम्रपान – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-nepali çeviri Sigara içmek / धुम्रपान – Diyaloglar
शमूएल: नमस्ते, गैरेथ! तिमीलाई कस्तो छ?
ग्यारेथ: म ठिक छु, धन्यवाद। र तपाईं?
शमूएल: म ठीक छु, धन्यवाद। यस समयमा म एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्दैछु र म तपाईंलाई केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु।
ग्यारेथ: यो के हो?
शमूएल: धूम्रपानको बारेमा। तिमीलाई थाहा छ म धुम्रपान गर्दैनु र मलाई धुवाँको गन्ध मनपर्दैन।
ग्यारेथ: हो, यो सत्य हो। तपाईं स्वस्थ जीवनशैलीको प्रशंसक हुनुहुन्छ। मेरो लागि म धूम्रपान गर्छु, तर म अन्त्य गर्न कोशिस गर्दैछु। यदि मैले तपाईंलाई परियोजनाको साथ कुनै तरिकामा मद्दत गर्न सक्दछु, तपाईं मलाई आफ्नो प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ।
शमूएल: खैर, सबैभन्दा पहिले मैले धूम्रपानका कारणहरूको बारेमा लेख्नु पर्छ। त्यसोभए मैले यस नराम्रो बानीको नकरात्मक प्रभावको सूचि बनाउनु पर्छ र युवा पुस्ताले यसलाई रोक्नको लागि मार्ग खोज्नु पर्छ।
ग्यारेथ: म देख्छु। त्यो एक उपयोगी परियोजना हुनुपर्दछ। यदि तपाईं जस्तो कोहीले मलाई किशोरावस्थामा धुम्रपानको हानिको बारेमा बताउनुभएको हुन सक्छ, सायद मैले यो सुरु गरेको पनि होइन।
शमूएल: यसैले म एउटा परिणामदायी परियोजना बनाउन चाहन्न। त्यसोभए, कम्तिमा पनि तीनवटा कारणहरू किन तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ भनेर बताउन सक्नुहुन्छ?
ग्यारेथ: सुरुमा त मेरो धुम्रपान गर्ने साथीहरूको कम्पनी राख्ने यो मात्र एक तरीका थियो। मलाई लाग्छ म कहिलेकाँही धूम्रपान गर्दैन किनकि म एक सिगरेट चाहान्छु, तर केवल सामाजिक हुनको लागि।
शमूएल: त्यो अवस्थामा, म तपाईंको कारण बिरूद्ध केहि कडा तर्क खोज्नु पर्छ। अर्को के हो?
ग्यारेथ: दोस्रो कारण हो, निकोटिनमा निर्भरता। एकचोटि तपाईंले धूम्रपान सुरु गर्नुभयो, तपाईं त्यसमा निर्भर हुन्छन्।
शमूएल: अरू कुनै कारणहरू?
ग्यारेथ: हो, अर्को। मलाई लाग्छ कि म नराम्रो भएमा म अधिक चुरोट पिउँछु। यो मलाई शान्त देखिन्छ। यद्यपि मलाई थाहा छैन यसमा कुनै तार्किक प्रमाण छ कि छैन।
शमूएल: धूम्रपान गरिसकेपछि तपाईंलाई कस्तो लाग्छ: स्वस्थ, ऊर्जाले वा उदास र थकित।
ग्यारेथ: बढी सम्भावित निराश र थकित हुन सक्छ। यसले धेरै ऊर्जा र स्वास्थ्य लिन्छ जस्तो देखिन्छ।
शमूएल: तपाईंले दिनु भएको सबै कारणहरूको उत्तर यही हो। यो वास्तवमै यसको लायक छैन। म मँ धेरै व्यक्तिहरूलाई चिन्छु, जसले वास्तविक धूम्रपान नगरी व्यक्तिहरूलाई धूम्रपानमा कम्पनी राख्छन्।
शमूएल: हो, यद्यपि मलाई यो मनपर्दैन, किनभने म निश्चित छु कि चुरोटको धुँवा इनहेलिंग पनि अस्वास्थ्यकर छ। जब म मेरा साथीहरूलाई भन्छु कि यसले मलाई अप्ठ्यारो महसुस गराउँछ, उनीहरू म धूम्रपान नगर्न कोसिस गर्छन्।
ग्यारेथ: दुई अन्य कारणहरू कसरी छन्? तपाईं कसरी उनीहरूको सामना गर्नुहुन्छ?
शमूएल: खैर, कुनै पनि प्रकारको निर्भरता हानिकारक र खतरनाक छ। एकचोटि तपाईंले बुझ्नुभयो कि तपाईं सिगरेटमा भर पर्नुहुन्छ, तपाईंले यो खराब बानी कसरी छोड्ने भनेर सोच्न थाल्नु पर्छ। र छोड्नु भनेको केवल तपाईंको शरीरलाई विषाक्त बनाउनबाट रोक्नु हो र तपाईंको स्वास्थ्यको बारेमा बढी हेरचाह सुरु गर्नु हो।
ग्यारेथ: यो एक कडा तर्क हो मैले भन्नु पर्छ।
शमूएल: स्नायुहरूलाई सुखदायक पार्ने कुरामा, मेरो विचारमा यो केवल एक छोटो अवधि का प्रभाव हो जुन यो लायक छैन। यो एक मनोवैज्ञानिक प्रकृति को अधिक छ।
ग्यारेथ: ठीक छ, तपाईसँग कुराकानी गरेपछि म धुम्रपान सम्बन्धी मेरा विचारहरूमा पुनर्विचार गर्न चाहन्छु।
शमूएल: म आशा गर्छु तपाईले सोच्न चाहानुहुन्छ?
ग्यारेथ: हो, वास्तवमै। त्यो म गर्न चाहन्छु।
शमूएल: यो सुन्न पाउँदा मलाई खुशी लाग्यो। मलाई आशा छ कि मेरो परियोजनाले अरू धेरै मानिसहरूलाई पनि मद्दत गर्दछ।
Uçakta, trende, otobüste एउटा विमानमा, एउटा ट्रेनमा, एउटा बसमा
Sigara içmek धुम्रपान
Benim UZMANLIK alanim मेरो पेशा
Aile Tatili nasıl planlanır कसरी पारिवारिक बिदाको योजना गर्ने
Hafta sonu için planlar सप्ताहन्तको लागि योजनाहरू
Otele Giriş होटल चेक इन